काठमाडौं । नेपालका २० देखि २९ वर्ष उमेर समूहका महिलामा विषादीको बढी संक्रमण देखिएको छ । तरकारी, फलफूल, खोर, गोठलगायत विभिन्न क्षेत्रमा बढी नै महिलाले काम गर्ने तर यी वस्तुमा विषादीको प्रयोग गर्दा कुनै सावधानी नअपनाउने गरेका कारण महिलामा बढी विषादीको सङ्क्रमण देखिएको हो । नेपालका ३२.५८ प्रतिशत महि...
धादिङको महेशखोलामा माइक्रो खस्दा १३ जना घाइते
काठमाडौं । धादिङमा माइक्रो र बस एकआपसमा ठक्कर खाँदा भएको दुर्घटनामा १३ जना घाइते भएका छन् । चितवनको टाँडीबाट काठमाडौं आउँदै गरेको बा ५ ख ३१५१ नम्बरको माइक्रो र काठमाडौंबाट भैरहवा जाँदै गरेको लु १ ख ३१३४ नम्बरको बस आपसमा ठोक्किएका थिए । एक आपसमा ठोक्किएपछि माइक्रो महेश खोलामा...
भारी वर्षा र बाढीको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह
काठमाडौं । देशभरको मौसम बदली तथा वर्षाको अवस्थामा रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । हाल देशको पूर्वी तथा मध्य क्षेत्रका अधिकांश भूभागमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली भएको र केही स्थानमा मेघ गर्जनसहित वर्षा जारी रहेको मौसमविद शान्ति कँडेलले बताइन् । यस्तै पश्चिमका भूभागमा आंशिकदेखि सामान...
विपी : दर्शन, राजनीति र साहित्यका त्रिवेणी
काठमाडौं । प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको योगदानको स्मरण गरी ३७ औँ स्मृति दिवस आज मुलुकभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि कठोर सङ्घर्ष गर्नुभएका कोइरालाको विसं २०३९ साउन ६ गते निधन भएको थियो । उनले नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा पनि मह...
उत्तर कोरियामा स्थानीय निर्वाचन सम्‍पन्‍न , ९९.९८ प्रतिशत मतदान
प्योङयाङ । प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरिया (उत्तर कोरिया) मा आइतबार स्थानीय स्तरको जनप्रतिनिधि चयनका लागि निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । प्रान्त, शहर तथा जिल्लास्तरीय नेतृत्व चयनका लागि स्थानीय समय अनुसार बिहान ९ बजेदेखि मतदान शुरू भै दिनभर मतदान भएको उत्तर कोरियाली राज्य सञ्चालित समाचार संस्था...
दाङमा खाल्डोमा डुबेर तीन महिलाको ज्यान गयो
दाङ । घोराही उपमहानगरको कुइने भन्ने ठाउँमा खाल्डोमा जम्मा भएको पानीमा डुबेर तीन जनाको ज्यान गएको छ । आइतबार बेलुकी खेतमा रोपाइँ सकेर घर फर्कने बेला हातखुट्टा धुन गएका बेला डुबेर ३ महिलाको ज्यान गएको वडा न १८ का अध्यक्ष भरत अर्यालले जानकारी दिए । सुरुमा एक जना महिला हातखुट्टा धुने क्रममा खाल्डोमा...
साउन, शृंगार र अध्यात्म : किन बस्छन् महिला नै व्रत ?
डा. नम्रता पाण्डे हिन्दु क्यालेन्डरअनुसार साउन आध्यात्मिक रूपले महत्त्वपूर्ण महिना मानिन्छ । तर अहिले आएर हिन्दु धर्म मान्ने महिला मात्र नभएर सबै धर्म–संस्कृतिका महिलाले यो महिनालाई महत्त्वका साथ लिएको पाइन्छ । यो महिनाभरि भगवान् शिवको आराधना गरेमा पुण्य मिल्छ । आफ्नो संस्कारको परिचय मिल...
विप्लवसँगको वार्ता : सरकारको दम्भ र 'फन्टुस प्रचार'
काठमाडौं । प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका नेता माइला लामा शनिबार मध्यराति काँडाघारीबाट पक्राउ परे । उनीविरुद्ध कर्तव्य ज्यान (ज्यान मार्ने) उद्योग र बम विस्फोटविरुद्ध मुद्दा चलाइने भएको छ । शनिबार मध्यरातमा काठमाडौंको काँडाघारीबाट पक्राउ परेका लामाविर...
तीन करोडमा बनेको पुल दुई महिनामै भाँसियो
काभ्रेपलाञ्‍चोक । निर्माण भएको दुई महीनामै काभ्रेपलाञ्चोकको पनौती नगरपालिका–१० साल्मिटार र वडा नं ११ बल्थली जोड्ने रोशीखोलाको पुल साल्मिटारतर्फ भाँसिएको छ । कराष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण, जिल्ला कार्यान्वयन एकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार कार्यालयमार्फत बन्दना भगवती जेभी नामक निर्म...
अध्यक्ष शर्मा बाहिरीएपछि त्रिवि सेवा आयोग रिक्त
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग अध्यक्षको पद आइबारबाट रिक्त भएको छ । तीन वर्षे पदावधि सकिएसँगै आयोगका अध्यक्ष चैतन्य शर्मा पदबाट बाहिरएका छन् । शर्मा अध्यक्ष रहेकै बेला आफन्तलाई स्थायी बनाएको विवादका कारण मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। आयोगको रिक्त अध्यक्ष पदमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयब...
विकास आयोजनाको ठेक्का अवधि जेठ मसान्त कायम गर्न मुख्यमन्‍त्रीको निर्देशन
रूपन्देही । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विकास आयोजनाको ठेक्का अवधि जेठ मसान्तसम्म मात्र हुने गरी सम्झौता गर्न अन्य मन्त्री र सचिवलाई निर्देशन गरेका छन् । मन्त्रालयले चालु वर्षको बार्षिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरणलाई सम्बोधन गर्दै उनले हरेक मन्त्रालयले ठेक्का मार्फत गर्ने कामको सम्झौता अवध...
अब भारतबाट पाइपमार्फत पेट्रोलियम पदार्थ, परीक्षण सफल
बारा । भारतको मोतिहारीदेखि अमलेखगन्जसम्म निर्माण गरिएको पेट्रोलियम पाइप लाइनको परीक्षण सफल भएको छ। औपचारिक उद्घाटनपछि पाइपबाट इन्धन आपूर्ति सुरु हुने बताइएको छ। भारतको बरौनीबाट पठाइएको डिजेल पटना–मोतिहारी हुँदै अमलेखगन्ज आएको हो। पाइप लाइनको परीक्षण सफल भएपछि अमलेखगन्ज डिपोमा पुगेका भारतीय...